Dhaqaaq guji midig guji HP Mini 210 Touchpad | Laga soo bilaabo Linux
Ku dhaqaaq midig guji HP Mini 210 Touchpad
Maalmahan isticmaale ka mid ah shaqadayda ayaa rakibay Kubuntu in uu HP Mini 210 wax walbana sifiican ayey u shaqeeyeen marka laga reebo in badhanada taabashada ah aanan haysan gujinta saxda ah, kaliya bidixda bidix ayaa shaqeysay
Muhiimadu waxay tahay noocan ah Netbooks Ma laha labada badhan ee jidh ahaan loo kala saaray sida moodooyinka kale (tusaale HP Mini 110), iyo aag kasta oo aad riixdo, had iyo jeer ku wajahan falalka dhagta bidix.
Synaptics ma aysan awoodin inay tan hagaajiyaan oo raadinta internetka waxaan helay xalka. Waxaan fureynaa terminal waxaana dhigey:
Waxaan dib u bilownay oo diyaar nahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Ku dhaqaaq midig guji HP Mini 210 Touchpad
Waxaan haystaa isla tusaalaha netbook, ma aanan ogeyn inaan ku rakibi karo kubuntu, waxaan u maleynayay inay aad u cusleyd, hadda waxaan isticmaalaa lubuntu. Waxa ugu fiican ayaa ah in aanan dhibaato ku qabin taabta taabashada.
Hadday suurtagal tahay, waxaan ku rakibay KDE buuggeyga 210 oo leh debian ... ma duulo laakiin wuxuu leeyahay waxqabad wanaagsan 😀
Hagaag, waxaan ku rakibay HP Mini 110 oo sifiican loo hagaajiyay, waxay ka fiicnayd waxqabadka Xfce xaalado badan.
Walaalkey wuxuu heystaa netbook ka mid ah tusaalahaas ilaa iyo hada wuxuu ku haystaa Windows XP barnaamijyadiisa korantada. Waxaan rajeynayaa inaan ku qancin karo inaad u guurto Debian, maadaama aan isku dayay inaan raadiyo barnaamijyada korantada Linux illaa iyo hadda, ma aanan helin.
U sheeg inuu isticmaalo waxa, waa jilitaanka wareegga wareegga, wuxuu faa'iido u leeyahay maadooyinka wareegyada 1, 2 iyo 3, elektarooniga 1, 2 iyo 3, iwm.
Qeybta xisaabinta, waxaad u isticmaali kartaa Python maktabadaha, si aad ugu bedesho matlab wax walba, iyo microcontrollers, si aad u sameyso odigo oo u soo uruuriso sawirka iyo qaab dhismeedka kale.
x to fpga waxaad sameyn kartaa koodhka oo waxaad u ekeysiin kartaa vhdl iyo veriloj.
Waa arrin la qabsado adeegsiga aaladaha kala duwan iyo kulliyadda, ha u carqaladeyn caqabadaha.
salu2 oo ka yimid COLOMBIA
xitaa iskuma dayin?
Laba sano ka hor waxaan ku rakibay kubuntu kumbuyuutarkeyga, Pentium 4, waxay qaadatay nolosheyda inaan rakibo desktop-ka xitaa jiirka wuu gaabiyay, isla maalintaas ayaan rakibay lubuntu. Maaddaama aan haysto Atom N450 oo ku yaal netbook-kayga ma aanan isku dayin, laga yaabee in sanadahan ay sifiican u fiicnaatay, waxaan isku dayi doonaa inaan ku rakibo debian iyo kde. Waxaan kuu sheegayaa sida ay u shaqayso 🙂
Ubuntu iyo noocyadeeda kala duwan waxay leeyihiin qaybo ka sii culus. Sidaa darteed, waxaan u adeegsadaa Debian oo waxay igu noqotaa waxyaabo yaab leh (iyo in aan GNOME 3 ku dhex jiro).
Dib u bilaabi? Maxaa dib loogu bilaabayaa? Ma isticmaashaa Windows!?
[koodh] # insmod psmouse proto = exps [/ code]
waa inay shaqeysaa…
Amar in la ogaado maalmaha ilaa dhamaadka sanadka
Ku hagaaji noocyada farta ah ee Debian bilaa xad la'aan